I-Suna Casa el patio - I-Airbnb
I-Suna Casa el patio
Pallanza, Piemonte, i-Italy
U-Maurizio Ungumbungazi ovelele
Indlu itholakala amamitha angu-100 ukusuka echibini kwelinye lamagceke asendulo e-Suna phakathi kwezindlu ze-Suna endala,ngaphakathi kwamagceke amadala, amamitha angu-200 ukusuka ezindaweni zokubhukuda kanye no-100 ukusuka emabhishi kamasipala. Emizuzwini engu-5 ungahamba ngezinyawo ukuya e-Pallanza. Indlu isesikhungweni esingokomlando, isiqhingi sabahamba ngezinyawo, ungahamba ngezinyawo. Kunezindawo ezimbili zokupaka ezikude ngamamitha angu-50, eyodwa e-Via Balilla kanti enye eceleni kwe-Via Toubetzkoy. Indlu isanda kulungiswa futhi iluhlaza ngokuphelele. Bheka IBALAZWE LENDAWO OKUYIYONAYONA
Indlu inomshini wokuqandisa nokushisisa umoya endaweni yokuphumula nasendaweni yokulala, enamathuba okushisa nokubanda kanye ne-dehumforcement. Igumbi lokugezela elikhulu futhi elithokomele elinesitolo se-shower esikhulu kakhulu. Indawo yokuphumula ingu-35 sqm ekamelweni elilodwa kunekhishi negumbi lokuphumula, ikamelo lokulala lisesitezi esiphezulu elinendlu yokugezela efakiwe.
Ikamelo lokulala linombhede olala abantu ababili, isihlalo esinesihlalo namatafula amabili aseduze kombhede namawodilobhu amabili. Kunethuba lokusebenzisa ngokunenzuzo i-balcony ngaphandle kwendlu ebheke inkundla ukuze uphumule ngemva kosuku uvakashele izindawo ezithandwayo eziningi.
4.90 · 97 okushiwo abanye
Indawo ezungeze idolobha elikhulu inesitayela seminyaka yasendaweni, inesimo esihle futhi isendaweni elinganiselwe yethrafikhi.
Indlu isendaweni ebizwa ngokuthi amagceke, eyayiyi-Suna endala lapho baqala khona ukwakha izindlu zokuqala futhi kamuva yakhiwa nxazonke.
Indawo ezungeze idolobha elikhulu ingena ngokuhamba emgwaqweni wamatshe, ivalelwe ithrafikhi esetshenziswa izakhamuzi kuphela ukuba zihambe.
Isimo esiyingqayizivele sendawo sivela endaweni yayo enokuthula nendawo ephakathi nendawo; ukushiya indlu nokuhamba emgwaqweni ukuya echibini lapho ufinyelela khona indawo ehlukile, ikakhulukazi phakathi nenkathi yezimbali. Isimo esihlanganisa izintaba nezitshalo ezinezimbali ezibomvu nezimhlophe.
Ngizohlezi ngitholakalela noma yimiphi imibuzo noma ukusikisela .
UMaurizio Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Pallanza namaphethelo